कति सम्मको लापरबाही ! लत्रिएकाे तारबाट करेन्ट लागेर वृद्धको ज्यान गयो ! ट्रिपरको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु….. - info4nepal
कति सम्मको लापरबाही ! लत्रिएकाे तारबाट करेन्ट लागेर वृद्धको ज्यान गयो ! ट्रिपरको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु…..
८ असार, रामेछाप । जिल्लाको सुनापती गाउँपालिकामा करेन्ट लागेर एकजना वृद्धको ज्यान गएको छ । सुनापति गाउँपालिका–१ का गुन्सी ढोडेनीमा भुँइमा लत्रिएको बिजुलीको तारमा करेन्ट लागेर दोरम्बा गाउँपालिका–५, गुराँसेका ७० वर्षीय पासाङ तामाङको ज्यान गएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रहरी निरिक्षक राजेन्द्र थापाले डोको बेच्न हिँडेका तामाङको किसान जागरण समूह गुन्सीले उत्पादन गरेको विद्युतको लत्रिएको तारबाट करेन्ट लागेर मृत्यु भएको जानकारी दिए ।
स्थानीयले किसान जागरण समूह गुन्सीको लापरबाहीका कारण घटना घटेको आरोप लगाएका छन् । बिजुलीको पोल ढलेर विद्युत्तीय तार लत्रिँदासमेत स्थानीय सरकार र किसान जागरण बेखबर बनेको भन्दै उनीहरुले दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरेका छन् ।
ट्रिपरको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु – भक्तपुरको सानोठिमीमा शुक्रबार बिहान ट्रिपरको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु भएको छ । सिन्धुपाल्चोक सेलाङ ६ घर भई हाल भक्तपुर सानोठिमी बस्ने ४८ वर्षीय चेत बहादुर थापाको मृत्यु भएको हो ।
गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारको क्रममा बी.एण्ड.बी अस्पताल ग्वार्कोमा शुक्रबार बिहान साढे ६ बजे मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरले जनाएको छ ।
आज बिहान सवा ५ बजे पेप्सीकोलाबाट भक्तपुरको अनुदान चोक तर्फ जाँदै गरेको बा २ क ३९३४ नम्बरको ट्रिपरले बा ६६ प ८५५३ नम्बरको स्कुटरलाई पछाडिबाट ठक्कर दिएको थियो । ट्रिपरसहित चालक ३० वर्षीय राजन खड्गीलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीले जनाएको छ । अनलाईन खबरवाट साभार।
झुट बोलेरै ५ वर्ष सरकार चलाउने योजना ?
“मेरो छोरीलाई छोरी भन्दै अंगालो हाल्थे, बलात्कार गरि मारे नरपिचाशले” (भिडियो सहित हेर्नुहोस्)….
एमाले :खुट्टा काटेर जुत्तामा मिलाउने ; काङ्रेस: खुट्टा अनुसारको जुत्ता बनाउने
ranjan April 23, 2018